virus ကိုက်နေလို့ပါ — MYSTERY ZILLION
October 2008 edited October 2008 in Antivirus & Virus
ကျွန်တော်အီမ်ကစက်မှာ my computer icon တွင် love icon ဆိုပြီးပြောင်းနေပါတယ်။ registry editor လည်းမပေါ်ပါဘူး။ .dll files တွေလည်း love icon ပြောင်းနေပါတယ်။ jpg icon တွေလည်းအရမ်းချစ်တယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ kaspersky 7.0 ကိုတင်ထားပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
October 2008 edited October 2008 Administrators
I have never seen this kind of virus. May be lack of my knowledge. Be sure Kaspersky to be updated.
However, Plz also chack whether any Visualization Software is applied to run or not. Some V S make that kind of changes on system.
Anyway, these all are just my opinion and suggestion. The person who may more brilliant may help u more effectively.
ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတယ်ခင်ဗျ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာပါ .dll တွေကမင်းသမီးပုံတွေဖြစ်သွားပြီး ဘေးနားမှာ I Love U လို့ရေးထားတာ။ jpeg တွေ "အရမ်းချစ်တယ်" icon ဖြစ်သွားတာ။ ဘာမှထူးထူးခြားခြားကြီးတော့မဖြစ်ဘူး။ pen drive autorun.inf ကနေ အလိုအလျောက်၀င်သွားတာပေါ့။ ဖြေရှင်းနည်းတော့မသိပါကြောင်း။ :D
အောက်ကလင့်မှာ ၀င်ပြီးတော့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ I Love You Virus နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြောပြထားပါတယ်။ remove လုပ်ဖို့ ဆော့ဖ်ထ်၀ဲကိုလည်း ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။
download or buy tuneup 2008 and install the program and go to registry hklm\_software\_microsoft\_windows\_currentversion\_policies hklm\_software\_microsoft\_windows\_currentversion\_run hkus\_software\_microsoft\_windows\_currentversion\_policies hkus\_software\_microsoft\_windows\_currentversion\_run del notaskmanager del noregistry del nofolder option runing kaspersky full scan if ur virus not die replace ur HD to another computer and killing ur virus
မရဘူးအစ်ကိုတို့ရ။ပြောဖို့မေ့လို့သူက task manger မှာ <<~.~>> ဆိုပြီးrun နေတယ်.end process လုပ် လဲမရဘူး ပြန်ပေါ်တယ်။windown ချတာလဲ ၃ ခါရှိပြီမသေဘူး။စက်ကတစ်ခါတစ်ခါလေးနေပါတယ်။သိရင်ပြောပြကြပါဦးနော်.........။
kasper7ကရော Update ဖြစ်ရဲ့ လား??
ဟုတ်တယ်..စစချင်းတော့(ထွက်ထွက်ချင်း ဒီVirus)မမိဘူး။kasper6ကမိတယ်။
နောက်ပိုင်း mail နဲ့မေးကျတော့ kasper7update မှာပါလားတယ်......
October 2008 edited October 2008 Registered Users, Moderators
ဒီဆော့ဝဲလ်လေး ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး run လိုက်ပါ။ အဲဒီကတဆင့် virus ရှိတဲ့နေရာကိုသွားသတ်ပါ။ အဲဒီကလဲဖျက်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီဆော့ဝဲလ်လေးသုံးနည်းကို ဒီမှာ လဲလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
flash drive တွေမှာ phyatkyee.blogspot.com နဲ့
Photos.exe ဆိုတဲ့ဖိုင်နှစ်ဖိုင် ရှိနေတယ်ဗျာ။
ပြီးရင် ဒီဖိုင်တွေကို run အောင် autorun file ရှိနေတယ်ဗျာ။
harddisk ရဲ့ c drive တို့ddrive တို့ထဲမှာလဲ DOS program shortcut တစ်ခုနဲ့ autorun file ရှိနေတယ်ဗျာ။
အဲဒီ DOS program ကတော့
<<~.~>> (c:\_windows\_system32 အောက်မှာ system files hidden အဖြစ် ရှိနေပါတယ်)
. (c:\_windows အောက်မှာ system files hidden အဖြစ် ရှိနေပါတယ်)
. (c:\_program files အောက်မှာ system files hidden အဖြစ် ရှိနေပါတယ်)
အပေါ်မှာပြောထားသလို my computer icon က love icon ဆိုပြီး မင်းသမီးပုံပြောင်းနေပါတယ်။ အရွယ်သေးရင် key ပုံလေးအဖြစ်မြင်ရတယ်။
.dll files တွေလည်း အရမ်းချစ်တယ်ဆိုပြီး ပြောင်းနေပါတယ်။ jpg icon တွေလည်းအရမ်းချစ်တယ်ဖြစ်နေပါတယ်။
autorun တွေ run မိသွားရင် သူ့က system files hidden ကိုလဲ hidden အဖြစ်ပြောင်းပစ်လိုက်တယ်ဗျ။
Folder Options > File Types ရဲ့အောက်က Registered file types ထဲက အောက်ဆုံးမှာ . တွေ ~ တွေနဲ့ types နှစ်မျိုးလောက်ပိုနေတယ်။ ပုံမှန်ဆိုမရှိပါ။ အဲဒီနှစ်ခုကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။
Task Manager ထဲမှာ run နေတဲ့ <<~.~>>, . , . , သုံးခုကို end task လုပ်လိုက်ပါ။
Task Manager ထဲမှာ end task လုပ်လို့မရရင် Process Explorer ဆိုတဲ့ software လေးတင်ပြီး end process လုပ်ပါ။
Folder Options ထဲက hide protected system files ကို uncheck လုပ်ပါ။
. (c:\_program files)
ဖိုင်အသီးသီးကိုရှာ delete လုပ်ပါ။
phyatkyee.blogspot.com နဲ့ Photos တွေကို registry ထဲမှာ find နဲ့ ရှာပြီး delete လုပ်ပါ။ Flash Drive ထဲကလဲ delete လုပ်ပါ။
harddisk ရဲ့ c drive တို့ddrive တို့ထဲက DOS program shortcut တစ်ခုနဲ့ autorun file တွေကိုလဲ delete လုပ်ပါ။ (အဲဒီ autorun file တွေကိုဖွင့်ကြည့်ပြီး သူ့ထဲမှာပါတဲ့ နာမည်တွေကို my computer နဲ့ registry ထဲမှာရှာပြီးဖျက်ပစ်ပါ။)
ပြီးရင်တော့ computer စဖွင့်တဲ့အချိန်တိုင်း၊ flash drive သုံးတဲ့အချိန်တိုင်း autorun မတက်အောင် ဒီ software လေး run ပေးထားလိုက်ပါ။
my computer icon က love icon ဆိုပြီး မင်းသမီးပုံပြောင်းနေတာတော့ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမယ်သိဘူးဗျ။
.dll files၊ jpg icon နဲ့ mp3 icon တွေအတွက်ကတော့
Folder Options > File Types ရဲ့အောက်က Registered file types တွေထဲမှာ အဲဒီအမျိုးအစားဖိုင်တွေလိုက်ရှာပြီးတော့ icon or open with ပြောင်းပစ်လိုက်ပါ။
USB ကို ဘယ်လိုမှ safely remove လုပ်လို ့မရဘူး။phone နဲ့ချိတ်ထားလည်း ဒီလိုပဲ။ " USB device cannot be removed becauseaprogram is still accessing it. " လို ့ပဲပြနေတယ်။USB device က မီးက လင်းနေတယ်။kapsersky internet security7သုံးပါတယ်။update လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ?
အဆင််််ပြေသွားပါပြီ။အဲ့ဒီကောင်လဲလုံးဝသေသွားပါပြီ။အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကို nyinge။ဝိုငိးအုံးစားပေးတဲ့MZ မှအကိုအားလုံးကိုလဲကျေးဇူးတင််ပါတယ်။ :):):):)
virus လား မသိဖူး အထိခံထားရတယ်။ desktop အောက်က နာရီဘေးမှာ။ virus alert ဆိုပြီးရေးထားတယ်။ registery တွေ၊ task manager ရယ်၊ ဝင်းဒိုး explorer တွေ၊ ကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့။ အကုန်ဖွင့်မရတော့ဖူး။ desktop properties တွေကောပဲ။ ပိတ်သွားတယ်။ print screen upload တင်တာမရလို့။ အခုတော့၊ regedit ရယ်၊ task manager ရယ် ပြန်ဖွင့်ပြီးပြီ။
သူက၊ start က ၊ run box တွေ၊ my computer တွေကို ပါ ဖျောက်ခဲ့တာ။
ထပ်ပြီးတော့ ဘယ်လိုစမ်းသပ်ရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
အဲ့လို မဖြစ်ခင် ကျွန်တော် နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တာကတော့။ KGB keylogger software တင်ကြည့်တယ်။ symantec က လက်မခံဖူး။ တင်ပြီး ပြန်မဖြုတ်ရသေးဖူးပျောက်သွားတယ်။ (မဖြုတ်မိသေးဖူးထင်တာပဲ) (အဲ့ တစ်ခုမသေချာဖူး)
နောက်ပြီးတော့။ Ardamax.Keylogger.v2.9.Incl.Keygen အဲ့ဒီဆော့ဝဲတင်ကြည့်တယ်။
အဲ့ဒါတင်ပြီးနောက်တော့မှ။ သူ့ကိုလဲ symantec ကလက်မခံပါ။ tray icon ကထွက်လိုက်ပြီး။ uninstall လုပ်ဖို့ရှာတော့ မတွေ့တော့ပါ။ အဲ့နောက် desktop ပေါ်သွားကြည့်တော့။ background ပြောင်းနေတယ်။ ပြီးတော့။ packed.generic.180 ဆိုတဲ့ ကောင်ရောက်နေတယ်။ သူက email list ထဲက add ကို auto distrubute လုပ်တယ်ဘာတယ်၊ အဲ့လို စာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်။
ဘယ်လိုတွေလုပ်ရမလဲ.. စစ်ရမလဲ.. အကြံလေး ပေးကြပါဦးဗျာ။
ပြီးတော့ virus မရှိတော့ဖူးဆိုရင်လဲ။ desktop properties လို ဟာတွေကို ဘယ်လို ပြန် enable လုပ်ရမလဲ..။
မေးတာတွေ ရေးတာတွေ တော်တော် များသွားပြီ။ :2:
ဖြေပေးကြပါဦး။ သုံးရမှာ လန့်လွန်လွန်လွန်းလို့ပါ....
kojoseph wrote: »
USB drives တွေကို safely remove လုပ်ဖို ့့ဒါအကောင်းဆုံးပဲ....
MZ member များအားလုံးကိုလေးစားလျှက် :77: